HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bichlamar Catalan Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galoà Goun Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Krio Kroaty Litoanianina Luo Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mingrelian Nahuatl (Huasteca) Norvezianina Oromo Papiamento (Aruba) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tojolabal Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Nanao ezaka manokana ny Vavolombelon’i Jehovah any Tailandy, nanomboka tamin’ny Desambra 2012, mba hanampiana ny ankizy hianatra tsara. Nitsidika sekoly tany amin’ny faritr’i Bangkok ny Vavolombelona 20. Nihaona tamin’ny talen’ny sekoly tsirairay izy ireo, ary namela ny gazety Mifohaza! Oktobra 2012 ho an’ny mpianatra sy ny mpampianatra. Izao no matoan-dahatsoratra amin’ilay izy: “Ahoana no Andraisan-tsoa Amin’ny Fianarana?”
Nisy vokany ilay ezaka nataon’ny Vavolombelona sady nitatra nanerana an’i Tailandy. Nahatratra 830 ny sekoly notsidihin’izy ireo tao anatin’ny herintaona sy tapany. Tsy andrin’ny mpianatra sy ny mpampianatra ny handray an’ilay Mifohaza! Tsy maintsy naverina natao pirinty intelo ilay gazety vao ampy ho an’ny rehetra. Niisa 30 000 teo ho eo ny Mifohaza! Oktobra 2012 nohafarana voalohany. Be mpitia anefa ilay loha hevitra tao amin’ilay gazety, ka nahatratra 650 000 mahery tamin’ilay izy no voazara.
Vetivety dia voamariky ny talen-tsekoly sy ny mpampianatra hoe tena ilaina ny Mifohaza! Hoy ny mpampianatra iray: “Hanampy ny mpianatra hifandray tsara amin’ny fianakaviany sy hanatratra tanjona tsara ilay gazety.” Nisy sekoly sasany nampiditra an’io gazety io ho anisan’ny fandaharana ao am-pianarana. Ny hafa indray nampiasa ny lahatsoratra ao amin’ilay izy mba hanaovana fampiasana. Nasaina nampiasa ny lahatsoratra tao amin’ilay gazety koa ny mpianatra tao amin’ny sekoly iray rehefa hanao famelabelarana, ka nahazo loka izay nahavita tsara indrindra.
Tian’ny ankizivavy iray ilay lahatsoratra hoe “Inona no Tokony Hataon’ny Ankizy Matavy Loatra?” Nilaza izy fa lasa be dia be ny olona matavy loatra, ary tsy mahazo aina mihitsy ny namany rehefa miresaka momba an’izany amin’ny olona. Hoy izy: “Misaotra betsaka anareo tamin’ny torohevitra. Mazava tsara ilay izy, sady mora ampiharina.”
Tena tian’ny ray aman-dreny koa ilay gazety. Nilaza toy izao, ohatra, ny renim-pianakaviana iray rehefa nisy Vavolombelona nitsidika azy tany an-tranony: “Misy torohevitra tena manampy ny zanako hianatra tsara ao amin’ilay izy.”
Hoy Atoa Pichai Petratyotin, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Tailandy: “Asongadin’ny Mifohaza! hoe tsy lany andro mihitsy ny fahendrena ao amin’ny Baiboly, sady mahasoa ny olona amin’izao fotoana izao. Tena zava-dehibe amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ny fianarana, ka faly izahay nizara an’iny gazety iny maimaim-poana tamin’ny olona.”
Tsy arakao intsony ve ny devoaranao? Inona no azonao atao?